Achilles ၏ဒဏ္ာရီနှင့်သူ၏ဖနောင့်: အတိုချုပ် - UniProyecta
ဒဏ္ancientာရီတွင်ရှေးဂရိနိုင်ငံ၌ရဲရင့်သူ၊ ရဲရင့်သူသည်သူတို့၏နတ်ဘုရားများထံမှသင်ယူခဲ့သောမှန်ကန်သောတိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်များတွင်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုကြောက်ရွံ့သောသူရဲကောင်းတစ် ဦး ရှိခဲ့သည်။ အဲဒါကိုခေါ်တာ Achilles Olympus တောင်ပေါ်တွင်လူသိအများဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ် ဦး ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သင်ကသူ့ရဲ့ဒဏ္mythာရီကိုသိလိုသလား။
မင်းကသူ့ဘ ၀ ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချိန်တွေကိုမင်းသိဖို့ဒီကြောက်စရာတိုက်လေယာဉ်ရဲ့နာမည်ကြီးဘဝကိုမင်းကိုပြောပြချင်တယ်။ သူ့မွေးချိန်ကနေသေတဲ့အထိမင်းမြင်လိမ့်မယ်။ ဟိ အဘယ်ကြောင့်သူသည်သရုပ်ဖော်တစ်ယောက်ဖြစ်သနည်း သူသည် ဦး ခေါင်းမှခြေချင်းဝတ်အထိမသေနိုင်သော်လည်းသူ၏ခြေဖဝါး၌သေတတ်သောအရာရှိ၏။ ဤအကြောင်းကြောင့်မြှားတစ်စင်းဝင်လာသည် သူ၏ဖနောင့်သည်သေခြင်းကိုဖြစ်စေသည်.
1 Achilles ၏မိဘများကားမည်သူနည်း။
2 Achilles ရဲ့ကလေးဘဝကဘယ်လိုလဲ။
Achilles သည်အလွန်ထူးဆန်းသောသမဂ္ဂမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီးသူ့၌သဘာဝနှစ်ခုဖြစ်သည့်လူသားနှင့်နတ်ဘုရားများပေါင်းစပ်ထားသည်။ သူ့အဖေဖြစ်ခဲ့တယ် ငါကသေစေနိုင်တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပါ လက်ထပ်ဖို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သူ Thetis, Olympus ၏မသေနိုင်သောနတ်ဘုရားမ.
Zeus နှင့် Poseidon သည်သူမ၏အချစ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမယှဉ်နိုင်သောအလှတရားရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း Olympus အပေါ်သူတို့၏စွမ်းအားများကိုစွန့်စားစေမည့်ကြောက်စရာကောင်းသည့်အရာတစ်ခုကိုသူတို့သင်ယူခဲ့ကြသည်။
မင်းကိုအရမ်းကြောက်လန့်စေတဲ့ဒီကြောက်စရာသတင်းကဘာလဲ။ တစ်နေ့သ၌ Titan Prometheus သည် Zeus နတ်ဘုရားအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။ အဲဒီမှာသူတို့မြင်တယ် Thetis သည်အလွန်အစွမ်းထက်သောသားတစ်ယောက်မွေးဖွားလိမ့်မည်သူ့အဖေကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့အထိအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
Zeus နှင့် Poseidon ဤဆိုးဝါးသောသတင်းကိုကြားရသောအခါသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သူကမျှဤဆိုးယုတ်သောသတ္တဝါ၏အဘဖြစ်လိုခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့သည်လှပသောနတ်ဘုရားမကိုရိုးရှင်းသောသေတတ်သောသူနှင့်လက်ထပ်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။
Thetis နှင့် Peleus တို့၏ကြီးကျယ်သောမင်္ဂလာပွဲနေ့ရောက်လာသည်။ ပွဲအတွင်းမှာ Eri, စိတ်သဘောထားမတိုက်တဲ့နတ်ဘုရားမ Eris, နတ်ဘုရားမ Hera, Athena နှင့် Aphrodite အကြားအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ နောင်တွင် Achilles ၏အဆုံးသည်အစဖြစ်လိမ့်မည်။
ဧည့်သည်များအားလုံးသည်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ် ဦး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ၊ သို့သော်ဤသို့ဖြစ်မလာပါ။ သူ့အမေ Achilles မွေးပြီးမကြာခင်မှာ ရေနတ်သမီးသူသည်သားနှင့်အဖေကိုစွန့ ်၍ သမုဒ္ဒရာသို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ဤအရာသည်သူမအားအရူးအမူးချစ်ပြီးသူမအားတစ်သက်လုံးလွမ်းစေသည်ဟူသောဤသတ္တဝါနှစ်ကောင်အတွက်အလွန်နာကျင်စေခဲ့သည်။
Achilles သည်သူ၏မွေးစ မှစ၍ ခွန်အားကြီးသောကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည်အလွန်လျင်မြန်သောကြောင့်၎င်းကို "လူသိများသည်"ခြေလက်” ။ သူသည်ခိုင်မာသောစရိုက်လက္ခဏာရှိသူ၊ ကျော်ကြားမှုအတွက်တဏှာရာဂကိုပြသပြီးသူ၏အမျိုးသားများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုငတ်သည်။ ပုံပြင်တွေကဒီအပြုအမူဟာသူ့အမေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့စိတ်ထဲဝမ်းနည်းမှုတွေဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။
သူသည်သူ့အဖေ Peleo နှင့်အတူ Phtia တွင်သူ၏ပထမဆုံးသောနှစ်များကိုဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ သူ၏ကြီးမြတ်သောဆရာမှာ Phoenix ဖြစ်ပြီးသူ့အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာတွေကိုသင်ကြားပေးသောသူဖြစ်သည်မရ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ Fénixကသူ့သားကိုသူ့အတိုင်းပဲချစ်တယ်၊ သူကသူ့ကိုအမြဲဂရုစိုက်ပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အထိသူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။
သူသည်ငယ်စဉ်က Patroclus နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်သူ၏စွန့်စားမှုအားလုံးကိုသူနှင့်အတူမျှဝေခဲ့သောလူငယ်တစ် ဦး သူတို့နှစ်ယောက်ဟာနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာနိုင်မယ့်တိုက်ခိုက်ရေးအနုပညာနဲ့အခြားပညာရပ်တွေကိုအတူတကွသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ သူတို့နှစ် ဦး သည်တစ်သက်လုံးအတူနေရန်အလွန်ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့ရောက်သောအခါ Achilles သည်သူ့အဖေအားသူ၏နည်းပြအသစ် Chiron ကိုစေလွှတ်သည်။ Chiron သည်ယဉ်ကျေးပြီးတိုက်ခိုက်ရေးနယ်ပယ်တွင်အလွန်ဗဟုသုတကြွယ်ဝသောကြောင့်အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထူးချွန်သော centaur တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ငယ်ရွယ်သောမင်းသားအားစစ်ပွဲများ၊ ဆေးဝါးများနှင့်စစ်ပွဲများအတွင်းရှင်သန်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသင်ကြားပေးသောသူဖြစ်ခဲ့သည်။
နတ်ဘုရားမယ်တော်နှင့်သေတတ်သောအဘ၏သားဖြစ်သောဤသူရဲကောင်းသည်သူ့ကိုအခြားဘုရားများနှင့်အခြားလူသားများထက်ထူးခြားသောဝိသေသတစ်ခုနှင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူဟာ demigod တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်မရ။ ငါဆိုလိုတာကသူကလုံးဝမသေနိုင်ဘူး၊ Achilles လိုအားနည်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုအားနည်းတဲ့ဘက်မှာရှိနေနိုင်မလဲ။
ဇာတ်လမ်းကပြောမထွက်ခင်သူ့အမေ၊ သူ့ကိုမသေဆုံးစေရန် Styx lagoon ၏ရေ၌နှစ်ချလိုက်သည်မရ။ သူမသည်သူ့ကိုနစ်မြုပ်ရန်သို့မဟုတ်ရေစီးကြောင်းမှသယ်ဆောင်သွားခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သူ၏ခြေဖဝါးကိုဆုပ်ကိုင်ထားသဖြင့်သူတို့သည်စိုစွတ်ခြင်းမရှိသလိုမှော်ရေပြင်၏အစွမ်းထက်အာနိသင်ကိုလည်းမရခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် Achilles သည်မည်သည့်ဒဏ်ရာကိုမဆိုရှင်သန်နိုင်သော်လည်းသူ၏ခြေဖဝါးများကြောင့်သေဆုံးလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်ကျော်ကြားသောစကားစုAchilles ဖနောင့်အားနည်းခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်တူဖြစ်သည်။
အဖြစ်အပျက်များသည်ဂရိနှင့် Trojan စစ်ပွဲဟုလူသိများသော Trojan များအကြားကြီးမားသောတိုက်ပွဲကိုအစပျိုးခဲ့သည်။ ဤတိုက်ပွဲသည်နှစ်ပေါင်းများစွာခန့်မှန်းထားပြီး Achilles သည်၎င်းသေလိမ့်မည်ကိုသိပြီးသားဖြစ်သည်။ သူ၏ချစ်လှစွာသောမိခင် Thetis သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြေငြာချက်ကိုသတိပြုမိပြီးသူ့ကိုမသေနိုင်စေရန်မှော်ရေနှင့်ရေချိုးသည်။
ထို့နောက်သူသည် Lycomedes ဘုရင်၏သမီးများအကြားတွင်စစ်တပ်များမှဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း Achilles ကိုပိုး၊ ဒိုင်း၊ လှံတို့ဖြင့်သူ့ကိုယ်သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်သူကြိုးစားမှုသည်အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဂရိစစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ခိုက်ရန် Odysseus နှင့်အတူထွက်ခဲ့သည်။
ရန်ပွဲအတွင်းသူ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်လူသိများပြီးမြို့များကိုဖျက်ဆီးသည်၊ လမ်းတွင်တွေ့သမျှအရာများကိုလုယက်သည်။ Trojan များအကြားကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုသူတို့ရှေ့မှောက်၌သူတို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့သိသည်။ ဒီစစ်ပွဲနယ်ပယ်တွေမှာ သူသည်သူ၏သူငယ်ချင်းကောင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်, Patroclusသူသည် Hector ကိုသတ်ရန်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောဒေါသနှင့်လက်စားချေရန်ငတ်သည်။
Trojans များအတွက်ကမ်းလှမ်းသောမြင်းများသည် Troy မြို့သို့ ၀ င်ရန်ထောင်ချောက်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မရ။ နံရံကြီးများကိုဖြတ်ကျော်သောအခါ Achilles သည်သူသေဆုံးသော်လည်းသူ၏လမ်းကြောင်းရှိအရာအားလုံးကိုဆက်လက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ Priam ဘုရင် Priam ၏သားတော်နှင့်နတ်ဘုရားမ Aphrodite ၏ကာကွယ်မှုဖြင့် Achilles ၏ခြေဖနောင့်တွင်အောင်မြင်သောရက်စွဲကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာစတင်ခဲ့သည်ကိုသိသည်။
Achilles ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး သူသည်ဂရိဒဏ္ologyာရီ၏အကျော်ကြားဆုံးသူရဲကောင်းများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်မရ။ Troop War တွင်သူ၏ပါ ၀ င်မှုသည်ဂရိတို့အားအနိုင်ရရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းဤအရာသည်သူ့အတွက်အသက်ဆုံးရှုံးစေခဲ့သည်။ ဒါဟာလက်စားချေလိုတဲ့ဆန္ဒတွေ၊ ဒေါသတွေနဲ့မကောင်းတဲ့ဆန္ဒတွေဟာသူရဲကောင်းပီသတဲ့ဝမ်းနည်းစရာသေခြင်းကိုဘယ်လို ဦး တည်သွားလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကဖြစ်ပြီ၊ ငါတို့ကမင်းအကြောင်းပြောဖို့ကြိုက်သလောက် Achilles ဒဏ္mythာရီကိုဖတ်ရတာကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်တယ်။ မင်းမှာ Achilles သူရဲကောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမင်းမှာမေးခွန်းရှိရင်မင်းအောက်က comment မှာထားခဲ့နိုင်တယ်။
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ယဉျကြေးမှု » ဂရိဒဏ္ာရီများ » Achilles ၏ဒဏ္ာရီနှင့်သူ၏ဖနောင့်